Trademark Attorney in Nigeria - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု run နေနှင့်တစ်ဦးစကားလုံးရှိနေတယ်ဆိုရင်, အထိမ်းအမှတ်, ထားသောစာပိုဒ်တိုများ, လိုဂို, ပုံစံ, သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုကိုယ်စားပြုသူတွေရဲ့သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်, it is important that you consider trademark filing and protection in Nigeria – (နိုင်ဂျီးရီးယားကမ္ဘာပေါ်မှာ transborder ကုန်သွယ်မှုများအတွက်အချက်အချာတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း).
Lex Artifex LLP နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကမ်းလှမ်း. As an accredited trademark attorney in Nigeria, ကျနော်တို့အချိန်မီနှင့်အတူ clients များပေး, cost-effective and top-notch trademark services.
We are licensed as IP Attorneys by the Nigerian IP Office (တနည်း. ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်, စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပညာဌာန၏မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဒီဇိုင်း Registry ကို, နိုင်ဂျီးရီးယား၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
ကျနော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးအသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဘက်တော်သားများ၏စီးပွားဖြစ်အတွက်အထူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကနိုင်ဂျီးရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ရုံးမှာအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် applications များပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုပေါင်းစပ်နှင့်အသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများအပေါ်ဥပဒေရေးရာထင်မြင်ယူဆပေး, ချိုးဖောက်မှုနှင့်တရားဝင်မှုကိစ္စများ.
ကျနော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် IP ကိုဖိုင်ပေါ်တွင်နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာ clients များကိုယ်စားပြု, အိုင်ပီအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်လိုင်စင်အစီအမံများရေးဆွဲ.
နိုင်ဂျီးရီးယားမှာကုန်အမှတ်တံဆိပ် FILE ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
1. ပုံစံတင်ပို့ရန်အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုမှတဆင့်တစ်ကျောင်းအုပ်ကြီးများအတွက်ဖန်ဆင်းထားသည် trademark attorney in Nigeria. To act for clients, ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာလက်မှတ်ရေးထိုးရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power ကိုလက်ခံ, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အပြည့်အဝအထူးသဖြင့်အတူ, client ကို / လျှောက်ထား၏လိပ်စာနှင့်နိုင်ငံသား.
2. The delivery time foraPreliminary Search Report to confirm the mark’s distinctiveness from existing and pending registrations is within five (5) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း.
3. ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်များအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်သည်အဘယ်မှာရှိ, တစ်ဦး လက်ခံ၏ပေးစာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်.
4. အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည် နိုင်ဂျီးရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ဂျာနယ် နှင့်တစ်ဦးကာလအဘို့အတိုက်အခံရန်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် နှစ် (2) လများ ကြော်ငြာသည့် နေ့မှစ..
5. ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးရန်မကန့်ကွက်သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းရရှိခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမကန့်ကွက်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦး မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏လက်မှတ် အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရကြလိမ့်မည်. ထုတ်ပေးသည့်အခါ, အဆိုပါမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မှတ်ပုံတင်နေ့စွဲအဖြစ်ကနဦးပုံစံတင်ပို့ရန်၏နေ့စွဲရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ် (တနည်း. ပုံစံတင်ပို့ရန်အသိအမှတ်ပြု၏နေ့စွဲ).
6. တစ်ဦးကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ် (အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်) အရောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရောင် format နဲ့. သို့သျောလညျး, ကအရောင် format နဲ့ပါလျှင်, ကာကွယ်မှုသာအရောင်ကန့်သတ်ခံရကြလိမ့်မည်. ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် (အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်), မှတ်ပုံတင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တင်ဆက်မှုအပေါငျးတို့သအရောင်များမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမတတ်နိုင်ကြမည်.
7. သင်တစ်ဦးပေါင်းစပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ပါလိုလျှင် (အရာစကားလုံးဒြပ်စင်များနှင့်ပုံဆောငျဒြပ်စင်နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်), ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသုံးပါဖို့သီးသန့်ညာဖက်ကတင်သွင်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့်အတွက်အတိအကျစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုသို့မဟုတ်လမ်းအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းမှကန့်သတ်. တစ်ဦးကို client အတွက်လိုဂိုကနေသီးခြားစီကသူ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏စကားလုံးဒြပ်စင်သုံးစွဲဖို့ဆန္ဒရှိသော်လည်း အကယ်. (သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်), ထို့နောက်မှသာသောစကားလုံးသို့မဟုတ်ပုံဆောငျဒြပ်စင်အပါအဝင်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးသီးခြားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်.
8. ပထမဦးဆုံးအ-to-file ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးအဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုသည်. နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော applications များတူညီသို့မဟုတ်အလားတူရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုသာပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ဘို့အရေးကြီးပုံကိုပေးတော်မူလတံ့.
9. နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ခုနစ်ယောက်ကနဦးတရားဝင်မှုရှိ (7) လျှောက်လွှာနေ့စွဲကနေနှစ်နှင့်ဆယ်၏နောက်ထပ်ကာလအဘို့အသတ်မရှိသက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည် (14) နှစ်ပေါင်း.
We are your progressive partner! စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံစူးစိုက် IP ကိုအကြံဉာဏ်, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားပြုမှု, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး +234.803.979.5959, သို့မဟုတ်အီးမေးလ် lexartifexllp@lexartifexllp.com. ငါတို့သည်သင်တို့အထောက်အကူပြုဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်!